Indlu isesimweni esihle kakhulu sokuvakashela iSalento - I-Airbnb
Indlu isesimweni esihle kakhulu sokuvakashela iSalento
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Roberta
U-94% wezivakashi zakamuva unikeze u-Roberta izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indlu yomlando enophahla oluvalekile izinyathelo ezimbalwa ukusuka enqabeni, enye yezinhle kakhulu e-Puglia. Elikhulu emnyango ehholo udla ndawo, i-TV kanye igumbi iziko kusukela 1600s Umbhede usofa angasebenzisa yokugezela elikhulu eseduze igumbi ophilayo. Okuyinto ufika kabili / twin igumbi lokugezela kanti ukugibela i ezitebhisini zangaphandle ufika endlini eyodwa nge yokugezela yangasese
Indlu inendawo enkulu yokuhlala. Kuyenzeka futhi ukudla kwasekuseni ngaphandle egcekeni elincane elinobuhlakani. Ikhabethe eliseduze nekhishi elidliwayo lifakwe insimbi, ibhodi, amathini kadoti, izesekeli zokuwasha, ikhalenda yokulahla imfucuza. Awukho umshini wokuwasha, kodwa ezitebhisini ezimbalwa ukusuka endlini, ngaphambi kwehholo ledolobha, kunendawo yokuwasha umuntu ozisebenzelayo.
Sitholakala esikhungweni somlando lapho kukwazi ukudlula ngemoto kodwa ungapaki. Ekugcineni ungama ukuze ulayishe futhi ulayishwe. Nokho, endaweni eqhele ngamamitha ambalwa, kukhona indlela yokuphuma esikhungweni esingokomlando esinethuba lokushiya imoto ngokuphepha
Ngihlala ngikhona esimweni esiphuthumayo, kukhona omunye wabahlanganyeli bami, uNkk. Marcella, esizeni. NgiseLecce futhi uma udinga izeluleko zokuvakashela idolobha siyatholakala.